 » Mayelana NATHI » Media Coverage
NgoJulayi 21, intatheli ize kuShaanxi Zhongbei Titanium Tantalum Niobium Metal Materials Co.
Imikhiqizo eyisiliva iqedile nge-luster yensimbi, amanye ayizigaxa eziyindilinga, ezinye ziyizicucu ezingunxande. “Le yinto eluhlaza esetshenziswe ekubonisweni komakhalekhukhwini we-Apple?”Ebhekene nemibuzo yentatheli, UMnu. U-Qi Baoming, umuntu ophethe ibhizinisi, kwethulwe ukuthi imikhiqizo eqediwe abayikhiqizayo icutshungulwa kusuka kuzinsimbi ezingekho zensimbi nezinsimbi ezingavamile kube imigomo yokumboza, okuyizinto ezisetshenziswayo zokubonisa isikrini. “Ngemuva kokuthi izinto zokusetshenziswa zinikezwa abanye abakhiqizi, zivuthisa izinto zokusetshenziswa ngemishini, kufuthwe ngokufananayo ebusweni bengilazi ukwakha ukumboza, nale ungqimba wokumboza, ingilazi ingabonisa isithombe.”UMnu. UQi Baoming uthe.
Ukwenza isembozo esifanelekayo sezinto zokusetshenziswa akulula, okokuqala nje, isilinganiso sensimbi silungile, i-gasification ukwakha izinhlayiya zensimbi ezinhle futhi ezifanayo. Okwesibili, ukuhlanganisa ngokuphelele izinsimbi eziningana, izinga lokushisa nalo libucayi kakhulu, kushisa kakhulu futhi kubanda kakhulu akunakuba, ukulawula okuncane okubi kuzoshintsha isimo, kuthinta umphumela womkhiqizo ophelile. Ngaphezu kwalokho, isicelo esibonisweni nasengilazini yezimoto, imikhiqizo yokugezela, isidingo sezinhlobo ezahlukene zensimbi, isilinganiso, izinga lokushisa nobuchwepheshe nakho kwehlukile. Ngokwalesi sizathu, ibhizinisi alichazanga isikhathi esiningi ocwaningweni nasekuthuthukisweni kokuhlolwa, ikakhulukazi ukuletha izinto zokusetshenziswa zokubonisa umakhalekhukhwini we-Apple, izidingo zinamandla kakhulu, zivame ukusebenza isikhathi esengeziwe ngokuqhubekayo ukuze kwenziwe izivivinyo, ngisho amaholide awaphumuli, ukumosha nje izinto ezibiza ngaphezu kwe- 100,000 yuan.
UMnu. UQi Baoming utshele izintatheli ukuthi leli bhizinisi selishintshe kancane kancane laba ibhizinisi lobuchwepheshe selokhu lasungulwa e 2017, ikakhulukazi ikhiqiza imigqa yokuxubha nokuxubha kwe-tantalum, niobium, zirconium, hafnium, ivanadium, i-nickel, titanium kanye nezinsimbi eziningi, futhi imikhiqizo isetshenziswa ezimbonini ezifana nezikrini zokubonisa, amakhamera, impahla ehlanzekile, amathuluzi e-ceramic, ingilazi enkulu, izingxenye auto kanye photoelectricity. “Ukuze sithuthukise amandla ethu, siyaqhubeka nokwenza ucwaningo nentuthuko, futhi kusukela inkampani yasungulwa, siye ephethwe eziyisikhombisa imodeli Umbuso ubuchwepheshe lobunikazi.” U-Qi Baoming wethuliwe, “ukuhlanzeka okuphezulu kwe-niobium rotary target” ubuchwepheshe obunamalungelo obunikazi bunobunye bobuchwepheshe babo obubaluleke kakhulu, yonke inqubo yocwaningo nentuthuko yokuhlola cishe iminyaka emine. Intatheli ithole ukuthi lobu buchwepheshe busetshenziselwa ikakhulukazi ukugqoka ingilazi enkulu, ngokusho kobuchwepheshe bangaphambilini, ukumbozwa kulula kakhulu ukukhiqiza izinhlayiya ezinkulu zensimbi, izokwenza umgodi wengilazi, ukuze wonke umkhiqizo uzosuswa. Ngemuva kokusebenzisa lobu buchwepheshe, i-sputtering ifana kakhulu futhi izinga lomkhiqizo ophelile lenyuswa ngu 20%.
IShaanxi Zhongbei Titanium-Tantalum-Niobium Metal Materials Co., Ltd. incike kubuchwepheshe bayo obuyisisekelo nomqondo wokuphathwa okuthembekile, ngama-oda womkhiqizo njalo nempendulo enhle evela kubasebenzisi. Kubikwa ukuthi emakota amathathu okuqala alo nyaka, ibhizinisi lithole ama-oda angaphezu kwekhulu futhi imali engenayo yokuthengisa ifinyelele ngaphezu kuka- 18 isigidi.